Kodhi yeWebKit inoratidza yakasviba modhiyo yemacOS 10.14 | Ndinobva mac
mufananidzo: B00merang Project
Iko kugona kusarudza yakasviba modhi, "Rima Rima" kana modhi yehusiku mu macOS parizvino haipo. Zvisinei, chiitiko ichi chiri kuramba chiri kudiwa nevashandisi; Uye ndeyekuti iyo purogiramu yekushandisa komputa haisisina kuganhurirwa kumaawa ane mwenje. Uye sezvakakurukurwa, iyo nzira yakasviba hainyanyo kunetsa kumeso edu. Izvi zvinogona kuve zvechokwadi mune macOS 10.14, inotevera yekuvandudza kuApple desktop desktop system, zvinoenderana nekodhi yakawanikwa muWebKit.
Parizvino, kusarudza yakasviba modhi inogoneka zvichienderana nechishandiso chatinoshandisa; ndokuti, zvinoenderana nezvinoonekwa nemusimudziri. Izvi zvinogoneka kubva kuiyo macOS El Capitan vhezheni. Saizvozvo, vashandisi isu tinogona kusarudza muZvirongwa zveSystem kana tichida iyo Dock uye nemenu bar mune yakasviba modhi. Nekudaro, windows, menyu, nezvimwe. ivo vacharamba vachiita bhuruu kana kuchena.
mufananidzo: Guilherme Rambo (9to5mac)
Zvino, sezvatatotaura, mukana wekusarudza yakasviba modhi nemushandisi weiyo system yese parizvino haigone. Asi sekurudzirwa nekodhi yeWebKit yakawanikwa na 9to5mac, nzira yakasviba inogona kurova inotevera vhezheni ye macOS, 10.14.
Iyo yekuvandudza uye mushandi wepakati akasarudzika muApple, Guilherme Rambo akatiratidza zvimwe zvezviedzo zvaakaita uye izvo zvaunogona kuona mumifananidzo yakasungirirwa kuchinyorwa chino. Kune rimwe divi, mupepeti pachake anotitaurira kuti hapana zvakagadzwa zvakanangana ne "Rima Rima" kana nzira yakasviba. Kunyangwe ichionekwa mu iyo WebKit kodhi yakatumirwa mukati memwedzi waKurume iyo Apple iri kushanda munzira yekushandura kutaridzika kwezvinhu zvehurongwa.
Pakupedzisira, uye sekureva kwaGuilherme Rambo, haina kuwana chero chinoratidza kuti iyi rima modhi inogona zvakare kusvika mune inotevera vhezheni yeIOS, iOS 12. Nekudaro, isu tinozvibvunza isu, chinhu ichi chakakosha kwauri here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Kodhi yeWebKit inoratidza yakasviba modhiyo ye macOS 10.14
Wenyika yekupedzisira Apple Watch Chitoro muIsetan Shinjuku kuvhara musi waMay 13